Sky Rolling Ball 3D – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
သင်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုနှစ်သက်။ Sky Rolling Ball 3D ကိုကျွမ်းကျင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ပါ!
၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောအခက်အခဲများကိုကျော်ဖြတ်ကာလျင်မြန်သောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချိန်များကုန်ဆုံးနေသည်! လိပ်, လှည့်, ခုန်, ဒါပေမယ့်လဲကျပြီးကိုယ့်ဘဝကိုမဆုံးရှုံးလိုက်ပါနဲ့! ၎င်းသည်စိတ္တဇလောကတွင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အားမလျှော့တဲ့ရူပဗေဒနဲ့!
Sky Rolling Ball 3D ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုသင်အလွယ်တကူသင်ယူလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမင်းကျွမ်းကျင်နိုင်ပါ့မလား? အချိန်သည်အနှစ်သာရဖြစ်သည်! Only speed and focus will help you သော့ခတ် more arenas with new challenges ahead! ပိုကောင်းအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကိုကျော်ဖြတ်ပါ! သင့်လမ်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ!
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ? သင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းကိုချိုး ဖျက်၍ သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပါ!
– လွယ်ပါတယ်, ဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်လက်တစ်ချောင်းဖြင့်ပွတ်ဆွဲပါ
– ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသော 3D ဂရပ်ဖစ်များ
သင့်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်ရန် Sky Rolling Ball 3D ဂိမ်းကိုယခုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
← နောက်ဆုံး Gear – လှိုင်သာယာ&Hack Stickman ပုံပြင်များ: Diamond Cheats ကိုခိုးခြင်း&Hack →